I-FlightGear 2020.3.12: Inguqulo entsha yesifanisi sendiza ekhishwe | Kusuka ku-Linux
Ukufaka kwe-Linux Post | 11/04/2022 06:00 | Aplicaciones, Izaziso
Esikhathini esingaphezu kwenyanga edlule, kwamenyezelwa ukuthi a inguqulo entsha isitebele esipholile umdlalo ovulekile wokulingisa indiza owaziwa ngokuthi I-FlightGear wayesekhululiwe. Le nguqulo entsha ngaphansi kwenombolo "I-Flight Gear 2020.3.12" Ngifaka izindaba ezithakazelisayo neziwusizo. Esizokumemezela namuhla, ukuze bangahlali bengabonwa.
Kumele uqaphele lokho esikhathini esingaphezu konyaka odlule, sisondela ngokujulile nangemininingwane okokuqala ngqa, lo mdlalo omuhle kakhulu enguqulweni yawo yangaphambili ezinzile, okungukuthi, Inguqulo ye-2020.3.11. Ngakho namuhla, sizogxila kuphela kwabo izindaba zamanje.
I-FlightGear: Umthombo wendiza ovulekile nobuchwepheshe ovulekile
Futhi njengenjwayelo, ngaphambi kokungena esihlokweni sanamuhla, mayelana nesibuyekezo esisha se- umdlalo wamahhala novulekile otholakala ku-GNU/Linux, futhi ikakhulukazi mayelana "I-Flight Gear 2020.3.12", sizoshiya kulabo abathanda izixhumanisi ezilandelayo kwabanye okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene. Ngendlela yokuthi bangazihlola kalula, uma kunesidingo, ngemva kokuqeda ukufunda le ncwadi:
“I-FlightGear iyisifanisi sendiza esiwumthombo ovulekile. Ngaphezu kwalokho, isekela izinkundla ezidumile (Windows, Mac, Linux, njll.) futhi ithuthukiswa amavolontiya aqeqeshiwe avela emhlabeni wonke. Ikhodi yomthombo yayo yonke iphrojekthi iyatholakala futhi ilayisensi ngaphansi kwe-GNU General Public License.". I-FlightGear: Umthombo wendiza ovulekile nobuchwepheshe ovulekile
I-Hedgewars kanye ne-0 AD: Imidlalo emi-2 emihle yokuzama kulo nyaka ka-2022 ku-Linux
1 I-FlightGear 2020.3.12: Ukuthuthukiswa okusha nokulungiswa
1.1 Yini entsha enguqulweni ye-FlightGear 2020.3.12
1.2 Isixwayiso esibalulekile
I-FlightGear 2020.3.12: Ukuthuthukiswa okusha nokulungiswa
Yini entsha enguqulweni ye-FlightGear 2020.3.12
Ngokusho kwe- okusemthethweni okufushane 20.3.12 okuthunyelwe, Okosuku 03 / 02 / 2022, lezi izindaba zamanje, ezihlanganisa ukulungiswa kweziphazamisi ezincane nokuthuthukiswa ezindaweni eziningi:
Izindaba: Izinto ezingeziwe ezifana nokuqinisekisa igama lenkomba yendiza, isinyathelo esingeziwe sokunqanda ukudayiswa (8x), isici esivumela indiza ukuthi ichaze amafonti angokwezifiso e-osg::Umbhalo, nezibani zenqubo ezihlanganisiwe ze-ALS nezibani Zomqambi. Futhi ekugcineni, izinto ezintsha zesifunda zase-Australia.
Ukulungiswa: Kusuka kuziphazamisi ekutholeni umzila ukuhlola kuqala, kanye ne-meteorology eyisisekelo ekhiqiza ukuphakama kwengcindezi okungavumelekile. Kulungiswe isiphazamisi kusistimu yomsindo ethulwa uma usondela ebangeni eliphakeme kakhulu lebanga, ukuphahlazeka okudalwe ngemva kokuqaliswa kabusha kwesistimu, ukuphahlazeka lapho i-AI yendiza inethrekhi eqondiwe engavumelekile, kanye nesiphazamisi sesakhiwo semephu kusendlalelo se-RTE. Futhi, kwenziwa ukulungiswa esakhiweni --view-offset ukuze kusetshenziswe indawo efanele. Futhi ekugcineni, i-HUD yalungiswa, ukwenza izinkomba eziqondile zibukeke zifana nezivundlile.
Ukuthuthuka: Yenze ukuthuthukiswa kokuhunyushwa kwesiRashiya neSpanishi, ingxoxo yesimo sezulu, Isiphequluli Sempahla, ukukhombisa amanani efolda kumodi ye-verbose; nakuMphathi Womzila, ukukhetha iphoyinti elilungile uma kukhona amaphoyinti endlela ayimpinda. Ekugcineni, izinhlelo zethrafikhi ze-AI zibuyekeziwe futhi kunezinhlobo ezintsha ze-AI zengeziwe.
Ngaphezu kwalokho, kule nguqulo kwenziwe okulandelayo isimemezelo esibalulekile:
"Kubasebenzisi abasebenzisa ithuba lokuhlanganisa kwethu i-Swift ukuze bandize i-VATIM, sicela uqaphele ukuthi okwamanje kukhona ukungahambisani namaseva e-VATSIM kuze kube kwenziwa ezinye izibuyekezo ezengeziwe ku-FlightGear: ngakho-ke kuzoba nokukhishwa kuka-2020.3.13 maduze nje. ukuhambisana ne-Swift."
Ukuze uthole olunye ulwazi, mayelana nalokhu nezinye izimemezelo zesikhathi esizayo sincoma ukuthi uvakashele eyakho Iwebhusayithi Esemthethweni, it Wiki y Blog. Futhi, kusuka kuwebhusayithi yabo esemthethweni ku- SourceForge. Nakuba, uma ufuna ukulanda futhi uyizame, ungakwenza lokho ngqo kweyakho Landa isigaba.
Ngamafuphi, njengoba sibona, "I-Flight Gear 2020.3.12" Kuyinto a isibuyekezo esihle, egcwele ukuthuthukiswa okuwusizo. Bazokwenzani ngempela, lowo mdlalo uthe usalokhu ungomunye wembalwa izilingisi zendiza evulekile, okumnandi ngempela. Ngaphezu kwalokho, ukuze kube okwakhayo kakhulu futhi efundisa. Sithemba ukuthi izibuyekezo ezintsha zizoqhubeka nokuthuthukiswa futhi zikhishwe njalo, ukuze umphakathi wabasebenzisi bakhona uqhubeke nokukhula kancane kancane.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-FlightGear 2020.3.12: Inguqulo entsha yesifanisi sendiza ekhishiwe
IFirefox 99 ifika nentuthuko, ukulungiswa kweziphazamisi nokunye